Nagarik News - समलैंगिक यौनसम्बन्ध भनेको के हो?
समलैंगिक यौनसम्बन्ध भनेको के हो? यो कुनै रोग हो? यसका असर के–के हुन्छन्? यसबाट बाच्ने उपाय के हो?
सामान्यतया समलिंगी यौनसम्बन्ध दुई किसिमका हुन्छन्– मनोवैज्ञानिक वा जन्मजात् र व्यावहारिक वा पछि सिकेर।
मनोवैज्ञानिक वा जन्मजात समलिंगीहरू शारीरिक रूपमा पुरुष वा स्त्रीजस्ता देखिए पनि भावनात्मक वा मनोवैज्ञानिक रूपमा ठीक उल्टो आचरण गर्छन्। यसको जिनेटिक कारण हुन्छ। उनीहरू आफ्नै लिंगीका मान्छेसँग यौनमात्र होइन, भावनात्मक रूपमा पनि आकर्षित हुन्छन्। समाज वा परिवारबाट उनीहरूलाई जतिसुकै यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन दबाब आए पनि यसबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। उनीहरू आफ्नो इच्छा वा रहरले यस्तो भएका पनि हुँदैनन्। अर्को अर्थमा उनीहरूको सृष्टि नै यसै रूपमा भएको हुन्छ।
जो यर्थाथमा समलिंगी हुन्छन्, उनीहरूले त्यसै रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ। उनीहरू अल्पसंख्यक यौनव्यवहार गर्ने व्यक्ति हुन्। विचलित वा रोगी होइनन् भन्ने तथ्य हाल विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार भइरहेको छ। दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा र अमेरिकाका केही प्रान्तमा तथा स्क्यान्डिनेभियाली देशहरूमा यस्ता व्यक्तिलाई विवाह गर्ने कानुनी अधिकार पनि प्राप्त छ या हुने क्रममा छ।
यस्तो व्यवहारलाई अल्पसंख्यक यौनव्यवहार मानेर अपराध र रोगको श्रेणीमा नलिने कुरा त आधुनिक विश्वमा सर्वस्वीकृत भइसकेको छ।
फेसबुके साथीले पठाएको क्यान्डी क्रस खेल्ने आमन्त्रणसहितको 'नोटिफिकेसन'लाई पछ्याउँदै तपाईं पनि क्यान्डी क्रस खेल्न थाल्नुभएको त छैन ? यदि थाल्नुभएको छैन भने के फुर्सदको दिन खेल्ने योजना बनाइरहनुभएको छ ?...
देश दशौँ लोकतन्त्र दिवस मनाउँदै छ। तर, नयाँ पुस्तामा यसको न उत्साह छ, न उमंग। 'प्लस टू पुस्ता' भनिने तन्नेरीलाई राजनीतिप्रति कुनै लगाव छैन। उनीहरू राजनीतिको 'र' पनि सुन्न चाहँदैनन्।...